Lionel Messi oo xulka Argentina uga soo tagaya Xafladiisa Arooska darteed!!!! – Gool FM
Lionel Messi oo xulka Argentina uga soo tagaya Xafladiisa Arooska darteed!!!!
Byare June 10, 2017
(Argentina) 10 Juunyo 2017. Lionel Messi ayaa ka soo tagaya xulka qaranka Argentina isla markaana ma safan doono kulanka saaxiibtinimo uu xulkiisa talaadada la yeelan doono Singapore.
Xiddiga Barcelona ayaa uga soo tagaya xulkiisa si uu ugu diyaar goroobo xafladiisa Arooska ee lagu wado inay dhacdo dhammaadka bishan.
Sidoo kale daafaca Man City Nicolas Otamendi ayaa isna lagu wadaa inuu ka soo tago xulka Argentina isla markaana uusan ka qeyb qaadan kulanka Singapore maadaama qudhiisa uu isku diyaarinayo aqal galkiisa oo dhacaya isla bisha June.
Haddii uu warkan sax noqdo oo uu Messi ka soo tagayo xulka wuxuu dhabar jab ku noqon doonaa qaban qaabiyayaasha kulanka saaxiibtinimo maadaama uusan soo xaadireyn laacibka ugu fiican adduunka.
Arooska Messi ayaa lagu wadaa inay ka soo qeyb galaan magacyo waa wayn inkastoo weli aan si rasmi ah loo heyn dadka lagu casuumay xaflada misane waxaa si hor dhac ah loo sheegay inaan casuumaad loo fidin tababarihii hore ee Barcelona Luis Enrique iyo waliba xiddiga ay sida wayn u xifaaltamaan ee Cristiano Ronaldo.
Argentina ayaa gool madi ah uga adkaaday xulka Brazil kulan saaxiibtinimo ay jimcihii ku yeesheen dalka Australia.
"Dhibaato uma rabo kooxdeyda" - Wenger oo si layaab leh isaga fogeeyay saxiixa Arda Turan
“Uma fiicna sida ay dadku ka sheegayaan.”. Pele oo si xun u weeraray Dybala